[Somali] 5 fikradood oo wanaagsan oo lagu yareeyo korontada guriga lacagtana lagu dhaqaaleeyo | energy.gov.au
Deraja kasta oo kor loo qaado kulaylinta ama qaboojinta, isticmaalida korontadu waxay siyaadin doontaa 5 ilaa 10 boqolkiiba. Si aad u xakamayso biilkaaga, ka fakar inaad ku hayso thermostat-ka 18–20°C xilliga qaboobaha iyo 25–27°C xilliga kulaylaha. Waxaad awoodaa inaad hesho dhamaan kulaylka ama qabawga aad rabto adoo xiraya albaabada gudaha, adiga oo kulaylinaya keliya qolalka aad isticmaalayso.
Tusaalayaal kala duwan oo wax ku oola oo korontada, qashinka, biyaha, iyo wax-ku-oolnimada safarka iyo weliba macluumaadka caawimada dawlada oo af Ingiriis ku qoran waxaa laga heli karaaa websaytka energy.gov.au.
5 fikradood oo wanaagsan oo lagu yareeyo korontada guriga lacagtana lagu dhaqaaleeyo [Somali] 242.44 KB